समावेशीकरणको आवाज उठाउने समुदायको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गराउने पहिलो पार्टी कांग्रेस हो : शान्ता तामाङ - Khabar Center
समावेशीकरणको आवाज उठाउने समुदायको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गराउने पहिलो पार्टी कांग्रेस हो : शान्ता तामाङ
सामाजिक कार्यमा अग्रसर,बहुमुखी प्रतिभाकी धनी नेपाली कांग्रेसकी नेत्री शान्ता तामाङ जुझारू र सक्रिय महिला नेत्रीका रूपमा परिचित हुनुहुन्छ। हामीले उहाँ संग नेपाली कांग्रेस र नेपाली कांग्रेस हाँक्ने नेतृत्वका बारेमा कुराकानी गरेका छौ। सफल नेत्री तामाङ संग गरिएको कुरा यहाँ प्रस्तुत गरेका छौ।
अब नेपाल कांग्रेस कस्तो हुनुपर्छ ?
- अब नेपाल कांग्रेस पाटीको १४ औ महाधिवेशन बाट नेपालको को संविधान मा भएका समानुपातिक समावेशीलाई लाई पार्टी भित्र पनि लागु गरि विभिन्न जातजाती, भाषा संस्कृतिका मानिसहरू लाई पार्टीमा जोडी सबै लाई पार्टी भित्र समेटर लिनुपर्छ ।
कस्तो नेतृत्वले कांग्रेस हाक्न सक्छ ?
पहिलो पुस्ता, दोस्रो पुस्ता र तेस्रो पुस्ता संग लिएर पार्टी लाई बलियो बनाई संगठन गर्न सक्ने नेतृत्व आजको आवश्यकता हो ।
कांग्रेसमा युवालाई आवद्द गराउन कांग्रेसले थप के के गर्ने पर्ने देख्नु भएको छ ?
-युवा नेतृत्व आज को मुख्य आवश्यक छ। दिन प्रति दिन समय को गति पनि परिवर्तन भई रहेको छ। युवाहरू लाई पाटी थप संगठित गर्न युवा नेतृत्व लाई प्रशिक्षण, दिनु पर्यो, पार्टी भित्र युवाहरू बिभिन्न तहमा भूमिका दिनु पर्यो त्यस पछि युवा आफै पार्टी भित्र संगठित हुन्छन।
आम नेपालीलाई कांग्रेसमा के कारणले आवद्द गराउन सक्ने सम्भावना देख्नु भएको छ ?
-नेपाली कांग्रेस स्थापना देखि नै देशको समावेशी पार्टी हो । यो पार्टी दलित, महिला, आदिवासी जनजाति, मधेशी, मुस्लिम, खर्सआर्य समुदायका व्यक्तिहरूबाट पार्टी निर्माण भएको हो। बिपी ले सुरुवात गरेको समावेशीता आज हाम्रो पार्टीका सभापति सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री शेर बहादुर देउवाज्युले पार्टी भित्र फैलाउनु भयो । पाटी केन्द्रीय कार्यसमिती पदाधिकारी देखी वडा सम्म समावेशी बिधान छ ।सबै भुगोल क्षेत्र समेटीएको छ । त्यस कारण आम नेपाली पार्टी भित्र अट्ने ठाउँ छ ।
तपाई नेपाली कांग्रेस को राजनीतिक मा के कारणले लाग्नु भयो ? कांग्रेस मै आबद्द हुनुको कारण के हो ?
-म नेपाली कांग्रेस पार्टीको राजनीतिमा लाग्नु नेपाली कांग्रेस एउटा समावेशी पार्टी नेपाली कांग्रेस पार्टीले देशमा विभिन्न परिवर्तन ल्याएको छ ।त्यसैले म कांग्रेस मा लागेर राजनीतिमा लागे ।
-नेपालमा राणा शासन, पञ्चायत व्यवस्था ढाल्ने पार्टी ,
-नेपाली को संविधान निर्माण गर्ने पार्टी
-सबै जातजाती को पाटी भीत्र र संबिधान मा व्यवस्था गर्ने पार्टी।
-महिला आयोग बनाउने पार्टी।
-दलित आयोग गठन गर्ने पार्टी ।
-आदिवासी जनजाति प्रतिष्ठान गठन गर्ने पार्टी।
-हलिया, कमैया मुक्त गर्ने पार्टी
राज्यको सबै संरचनामा समावेशी समानुपातिक समावेशीकरणको आवाज उठाउने समुदायको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गराउने पहिलो पार्टी कांग्रेस भएको हुँदा म सबैलाई कांग्रेसमा लाग्न आग्रह पनि गर्दछु।
प्रकाशित मिति :आश्विन २० २०७८ बुधवार - ११:१८:४० बजे
बीबीसीमा चोलेन्द्रको अन्तरवार्ता : संसद्‍बाट बिदा हुन तयार छु, राजीनामा माग्नेलाई जनताले दण्डित गर्छन्
ईसीडी शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीलाई दुःख दिएको भन्दै शिक्षक महासङ्घकी अध्यक्ष यसरी पड्किईन ( अन्तर्वार्ता सहित)
ईसीडी शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता व्यवस्था गर्ने तयारीमा रहेको गाउँपालिका शिक्षा प्रमुख के भन्छन् ?
शिक्षक सेवा आयोगका अध्यक्ष भन्छन- शिक्षकको खाली दरबन्दी छिट्टै पूरा गर्छौँ